हिटलरको यो कथा जसले नेपाली राजनितिको चित्रण गर्छ - Lekbesi Khabar
हिटलरको यो कथा जसले नेपाली राजनितिको चित्रण गर्छ
हिटलरले एकदिन संसदमा एउटा जिउँदो भाले लिएर आएछन् र एकएक गर्दै भालेको प्वाँख उखेल्दै गर्न थालेछन । भाले पिडाले चिच्याईरहँदा पनि सबै प्वाँख नसकिए सम्म उनले छाडेनछन। पखेटा बिहिन ज्युदो भालेलाई अब उनले मकैका केही दाना चारो फाल्न थालेछन, भाले चारो खान थालेछ । अब हिटलर अरु एकदुइ दाना मकै झार्दै हिड्न थालेका के थिए भाले दानाको आशामा हिटलरको पछिपछि हिड्न थालेछ । यसरी जता हिटलर हिड्यो उतै पछि लागेको भालेले बिर्सिएछ कि, मेरो प्वाख मुण्डन कर्ता हिटलरले मेरो कल्याण गर्दैनन् ।
यस पछि सभामुखलाई संबोधन गर्दै हिटलरले भने छन , सभामुख महोदय , नेतामुखी ब्यबस्थामा नेता र जनता बिचमा यस्तै सम्बन्ध हुन्छ । जनता र देशलाई पुरै नाङ्गो बनाउदा पनि जनता नेताको पछिपछि लाग्न छोड्दैनन । यसरी नेताको पछि लाग्ने जनताले कस्तो नेतृत्व चयन गर्लान ?
अहिले नेपाल पनि यही रोगबाट ग्रसित छ । कुनै नेता गतिला नभए पनि जनता गुणगान गाउन छोड्दैनन् ।कोही आजन्म कांग्रेस, कोही आजन्म कम्युनिष्ट, कसले गर्छ गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा बिरोध ? अनि कसरी सम्भव हुन्छ वास्तविक परिवर्तन र प्रगती ?
१० मंसिर २०७५, सोमबार ०७:११ November 26, 2018
वाइडबडीबारे लेखा समिति : साढे ६ अर्ब घोटाला